Zaw gyi မြန်မာဖောင့် Version 4.3အထိပါ။ rootလုပ်စရာမလိုဘဲထည်နိုင်ပါတယ်။ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on November 10, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Android version 4.2.2တွေကစပြီး မြန်မာစာမမှန်ဘူးလို့ပြောနေကြလို့ အခု နည်းပညာများ ဆော့ဝဲလ်များနှင့်Gameများ Blogမှာတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ။ ဒီPostကိုရေးသား
တဲ့ ကို Thet Paingကိုလည်း Creditပေးပါတယ်။
ဇော်ဂျီဖောင့်ဟာ android version 4.2.2ကနေစပြီး
ကြတယ်။rootဖောက်ပြီးတာတောင် font ပုံစံတွေ
လေးများကဖြေရှင်းပေး နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်
ရာကိုထည်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ samsung ဖုန်း
version 4.3အထိဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင့်ပုံစံလေးတွေ
password တောင်းပါက thetpaing လို့ရိုက်ထည်ပေးလိုက်ပါ။တခြားဖုန်းများနှင့်စမ်းသပ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်ပြောပေးခဲ့ကြပါအုံးလို့………..
← အသံအရည်အသွေးကောင်းကောင်း နဲ့ အသံဖမ်းချင်လျှင် Easy Voice Recorder Pro Apk v1.7.3	Windows7Sp1 Apple Edition 2013 (x86/Eng/July2013) |3Gb ( 21 ဖိုင် ) →
4 thoughts on “Zaw gyi မြန်မာဖောင့် Version 4.3အထိပါ။ rootလုပ်စရာမလိုဘဲထည်နိုင်ပါတယ်။”	လေး ဖြု says:	November 11, 2013 at 1:10 pm	acer z130 မြန်မာဖောင့် လုံဝ မပေါ်လို့ မြန်မာဖောင့် ရနိုင်မယ့်ဆော့ဝဲ လေးရှိရင် ကူညီပြီး ရှာပေးပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	လေး ဖြု says:	November 11, 2013 at 1:10 pm	acer z130 မြန်မာဖောင့် လုံဝ မပေါ်လို့ မြန်မာဖောင့် ရနိုင်မယ့်ဆော့ဝဲ လေးရှိရင် ကူညီပြီး ရှာပေးပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	Soewin Maung says:	November 11, 2013 at 6:51 pm	ဇော်ဂျီ ၄.၃ ကို install လုပ်ပီးပါပြီ ဒါပေမယ်. ကို install လုပ်ထားတဲ. font ကိုဘယ်မှာသွားပြီး ရွေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ် ကျေးဇူးပြုပီးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်.ဖုန်းက Android v4.3 ပါခငိဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်